Fumana ukuba kungani i-agape yindlela ephezulu kakhulu yothando.
Uthando luka-Agape aluzimeli, lugqithiso, uthando olungenammiselo. Yona iphakamileyo yeendlela ezine zothando eBhayibhileni .
Igama lesiGrike, agápē, kunye nokuhluka kwalo kudla rhoqo kwiTestamente Entsha . UAgape uchaza ngokucacileyo uhlobo lothando uYesu Kristu analo ngoYise nakubalandeli bakhe.
Agape yigama elichaza uthando olungenakulinganiswa noluntu olungenakuqhathaniswa noluntu. Yinto yakhe eqhubekayo, ephumayo, eyazibongela abantu abalahlekileyo nabangenele.
UThixo unikela lo mthando ngaphandle kwemeko, ngokungaphepheli kwabo bangenakufanelwa kwaye bangaphantsi.
U-Anders Nygren uthi: "Uthando lwama-Agape," aluyi kuphazamiseka ngolu hlobo lokuba alukho nawuphi na ukubaluleka okanye lufanelekile kwintando yothando. kwimeko ethile. "
Indlela elula yokutshintshisa i-agape yothando lukaThixo.
Agape Uthando eBhayibhileni
Enye into ebalulekileyo yothando lwama-agape kukuba iqhubeka ngaphezu kwemvakalelo. Kukhulu kunomvakalelo okanye ukuvakalelwa. Uthando lwe-Agape lusebenza. Ibonisa uthando ngezenzo.
Le vesi yeBhayibhile eyaziwayo ngumzekelo opheleleyo wothando lwama-agape olubonakaliswe ngezenzo. Uthando olubanzi luphela lukaThixo kulo lonke uluntu lwabangela ukuba athumele unyana wakhe, uYesu Kristu , ukuba afe, ngoko ke, sindisa wonke umntu oya kukholwa kuye:
Ngokuba uThixo walithanda kangaka ihlabathi, ukuba wanikela uNyana wakhe oyedwa, ukuba wonke umntu okholwa kuye angabhubhi kodwa abe nobomi obungunaphakade. (Yohane 3:16, ESV)
Enye intsingiselo ye-agape eBhayibhileni "yayithandana nomthendeleko," ukutya okuqhelekileyo ebandleni lokuqala kubonisa ubuzalwana abangamaKristu kunye nobudlelwano :
Le mifihla efihlakeleyo kwimikhosi yakho yothando, njengokuba idla nawe ngaphandle koyiko, abalusi bayondla; amafu angenamanzi, aqhutywe ngumoya; imithi engenakuqhayisa ekwindla, efile kabini, ihluthwe; (Yude 12, ESV)
UYesu watshela abalandeli bakhe ukuba bathandane ngendlela efanayo nangendlela awayebathandayo ngayo. Lo myalelo wawutsha kuba wawudinga uhlobo olutsha luthando, uthando olunjengeyakhe: uthando lwe-agape. Yintoni eya kuba sisiphumo solu hlobo lothando? Abantu babeza kubabona njengabafundi bakaYesu ngenxa yokuthandana kwabo:
Ndiwunika umthetho omtsha, ukuba nithandane; njengokuba ndithandile, nani nithandane. Ngale ndlela bonke abantu baya kukwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba nithandana. (Yohane 13: 34-35, ESV)
Ngaloo siyazi uthando, ukuba wabeka ubomi bakhe ngenxa yethu, kwaye sifanele sibeke ubomi bethu kubazalwana. (1 Yohane 3:16, ESV)
UYesu noYise banjalo "ngokukodwa" ukuba ngoYesu, nabani na abamthandayo baya kuthandwa nguYise noYesu, naye. Iingcamango kukuba naliphi na umakholwa oqalisa lolwalamano oluthando ngokubonisa ukuthobela , uYesu noYise baphendule nje. Ubunye phakathi kukaYesu nabalandeli bakhe lububuko bunyano phakathi kukaYesu noYise wasezulwini:
Lowo unayo imiyalelo yam, uyigcine, nguye ondibathandayo. Lowo undithandayo uya kuthandwa nguBawo, kwaye mna ndiya kubathanda kwaye ndibonise kubo. (Yohane 14:21, NIV )
Mna mna kunye nawe kum, ukuze babe ngabanye, ukuze ihlabathi likwazi ukuba undithumile, ndibathande njengokuba undithandayo. (Yohane 17:23, ESV)
Umpostile uPawulos wabongoza abaseKorinte ukuba bakhumbule ukubaluleka kothando. Wayefuna ukuba babonise uthando kuyo yonke into abayenzayo. UPawulos waphakamisa uthando njengomgangatho ophezulu kule ncwadi eya kwibandla laseKorinte. Uthando ngoThixo nakwabanye abantu kwakukukhuthaza bonke abakwenzayo:
Yenza konke okwenzayo kwenziwe kwintando. (1 Korinte 16:14, ESV)
Uthando aluyena nje umqondiso kaThixo , uthando luyinto yakhe. UThixo uyayithanda kakhulu. Nguye kuphela othandayo ekuphelelweni nasekuphelelweni kothando:
Nabani ongathandiyo akamazi uThixo, kuba uThixo uluthando. (1 Yohane 4: 8, ESV)
UYesu waphila ngothando lwama-agape ngokuzinikela ngenxa yezono zehlabathi.
Ezinye iintlobo Zothando eBhayibhileni
U-Eros ligama luthando okanye uthando.
UFilia uthetha uthando lobuzalwana okanye ubuhlobo.
Storge ichaza uthando phakathi kwamalungu entsapho.
> IBloesch, iDG (2006). UThixo, uSomandla: amandla, ubulumko, ubungcwele, uthando (iphe. 145). Downers Grove, IL: I-InterVarsity Press.
Ukusetyenziswa kwamanani oThengiselo lweeNqola ukusuka ngo-2000 ukuya ku-2015
Imifanekiso yee-Skaters ifanelekile kwiimidlalo ze-Olimpiki zeHlabathi?
Ukubulala i-Mockingbird: Imibuzo yeClub Club Discussion